MAXAA CUSUB | GURIGA HAWEENKA | Page 5
Home » MAXAA CUSUB (page 5)
Admin 2 days ago	Heath, MAXAA CUSUB
In badan waan iska fududeysannaa caafimaadkeenna, inagoo aaminsan in wax dhibaato ah nagu soo foollahayn, laakiin marka cudur si lama filaan ah uu kuugu soo boodo ayaan bilaabeynnaa inaan si wanaagsan ula soconno wax kasta oo caafimaadkeenna ku saabsan, waana xilli aan dib dhacnay.
In badan waxaan aragnaa astaamo fudud oo aan iskaga qaadanno iney yihiin wax fudud, laakiin loo baahan yahay inaan si wanaagsan iskaga eegno oo aan ku baraarugno,
Dhakhtaradda caanka ah ee Dr Evelyn Lewin oo la hadashay website ka Whimn ee kasoo baxda dalka Australia, ayaa soo bandhigtay dhowr cudur oo marka hore astaamahoodu u muuqdaan kuwo sahlan laakiin marka dambe ciribtooda aan la mahdin, Astaamaha ay sheegtay waxaa ka mid ah:
Calool qabatinka lama filaanka ah
Dhakhtaraddu waxay leedahay xanuun kasta oo dhanka caloosha kaa soo waajaha xilli hore iska baar, xitaaa haddii marka dambe ay soo baxdo inaanuu mid iska caadi ah.
Hamaansiga Sabab la’aanta ah
Haddii aad astaantan isku aragto ogow iney ku tusineyso xaalad degdeg ah iney jirto, Dr Lewin waxay leedahay waxaa dhici karta inuu jirto cillid dhanka sambabaha ah ama waxa caafimaad ahaan loo yaqaanno (Pulmonary embolism), Waxaa kale oo jiri kara, ayay leedahay, sababo kale oo ka duwan arrintaa, marmarka qaar waxaa dhacda inaanuu dhibaato sidaa u sii buuran lahayn, sidaa darteed waxaa habboon markii aad isku aragto astaamahaa inaad dhakhtar aaddo.
Madax xanuun xooggan
Oon aan kaa ba’ayn
Haddii aad isku aragto inaad harraadan tahay adigoo biyo ka dhargay, waxaa habboon inaad dhakhtarka aaddo si baaritaan lagugu sameeyo. Dhakhtaraddu waxay leedahay oonka noocaas oo kale ah waxaa dhici karta inuu kuu qarinayo cudurka sokorta ah. Sidaa darteed marka dhiigga sokortu ku badato waxa uu kalyaha farayaa iney kaadi badan soo saareen sidaas ayaa jirku harraad dheeraad ah u dareemayaa.
Warwalba ogow qofka wax xaqiijin karaa waa dhakhtar oo kaliya, ka fogow dhaqanka dadka qaar ee iyagu ismooda iney dhakhaatiir yihiin laakiin si qarsoon naftooda halaaga ugu tuuraya.
Ciriiriga dhanka laabta ah, qoor xanuunka, dhabar xanuunka
Waxaa la iska yaqaanna laab xanuunka inuu hor dhac u yahay xanuunnada dhanka wadnaha ah, laakiin waxaa dhici karta qofku marka uu astaamahaa isku arko inuu u baahan yahay daryeel caafimaad oo degdeg ah.
Mar kasta oo aad aragto waxaad ka shakiso ee aadan horey u arki jirin waxaa habboon inaad dhakhtar aaddo, sidaa darteed waxaa habboon inaan nolosheenna caafimaad si gaar ah u eegno oo aan markasta nafteenna daryeelno.
DARAASAD CAJIIB AH: Ma Ogtahay In Xulashada Dumarka Ee Dhanka Ragga Farqi Weeyn U Dhexeeyo 2016 & 2017? Maxaase Isbedelay (Ragga Gaagaaban Ayey U Shidan Tahay)
Admin 2 days ago	LOVE, MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Iska ilow dhirirka , Midabka madow iyo quruxda , badin xilligaa gabdhaha aduunka waxaa ay guursanayaan raga caaqiliinta ah iyo sidoo kale kuwa gaagaaban , kuwa midabka madow ,balse maxay tahay sababta?
Daraasad cusub lasameeyey ayaa lagu ogaaday in xilligaan badnaa haweenka ay aad u xiiseeyaan inay guursadaan raga gaagaaban.
Match.com ayaa sameeyey daraasadaan waxaana uu tirikoob ku sameeyey webkaan malaayiin dad ah kuwaas oo qooysas leh , gaar ahaan waxaa la weydiinayey dooqa haweenka iyo sida ay u jecel yihiin inay xiriir jacey ula sameeyaan nimanka gaagaaban.
Qof walba waxaa uu baxsaday aragti gaar , sidoo kale qof walba waxaa uu jeclaa inuu dookhiisa ku qanciye weydiiyaha , balse waxaa la ogaaday inta badan dookha soo jiidasha leh ee dumarka.
Inta badan daraasada natiijadeeda sanado kadib waxaa la xaqiijiyey in inta badan dumarka aan xiiseeyn nimanka dhaadheer , waxaa ay doonayaan inay helaan wiil STYLE Ah kaasi oo dhirir ahaan aan dhaafsaneeyn 1.3cm
Sanadkii 2016 Tusaale daraasad la sameeyey ayaa lagu ogaaday in raga dhirirka leh saameeyn ka dareemaan dumarka, waxaana yaraaday xiriirka guur ee lala sameeyo.
‘’Waxaa macquul ah in waxyaabo badan la isweydiinayo kuna saabsan dareenka , ma raga gaagaaban ayaa ka dareen fiican kuwa dhaadheer,yaase sheekadaas dumarka u damaanad qaadaya ,’’ waxaa sidaas yiri Lee Johnson oo 32 sano jir ah kana mid ahaa dadkii daraasada ka doodayey.
‘’Waxaan arkay rag badan oo guursanayaan dumar gaaban.ma waxay taasi lamicno tahay inaadan habeenkii u galmoo Karin, laakiin xaqiiqda ayaa ah in la iska ilaaliyo hadalada laab lakaca ,’’
Sidoo kale sanadkaan 2017 ayaa markale la sameeyey daraasada , waxaana la helay nambar ka duwan midkii sanadkii hore ee dhanka guurka iyo dookha,sababtoo ah inta badan dumar sanadkaan waxaa ay xiriir la sameeyaan raga gaagaaban.
Ragga waxaa la ogaaday in dhirirka aysan ku xalin dumarka balse waxaa ay inta badan ka fiiriyaan meelo kala duwan waxaana kamid ah (Indho deeraley , Indho Buluug ah, Timo Dhaadheer, IWM.
MURUGO BADAN OO FARXAD KA DAMBEEYSEY: Hooyo 18 Jeer Ilmo Kasoo Halaabeen Oo Ugu Dambeeyn Umushay Iyadoo Jirta Da’da 48.
Admin 2 days ago	MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Duniaadaan la joogo ruux walba waxaa uu doonayaa inuu helo mid kamid ah riyooyinkiisa ugu wanaagsan oo ah inuu helo caruur , balse mararka qaar waxaa dhacda inuu qofka lakulmo musiibo rabaani ah.
Sheekadaan waxaa ay taabaneysaa haweeneey 18 jeer kasoo dheceen caruur ama kasoo halaabeen sababtoo ah waxaa ay xanuun ka dareemeysey RIXIMKA(Min-Galeenka), waana sababta 18 uur oo ay qaaday ay kaga soo halaabeen.
Laakiin waxaa wanaagsan mar walba inaadan ka quusan rajada sababtoo ah Lauren Warneford ayaa hada ugu dambeeyn hooyo noqotay iyadoo jirta da’da 48, waxaana ay ahayd dhacdadii ugu yaabka badneey , sababatoo ah waa murugo badna oo farxad ka dambeeysey.
IVF (In Vitro Fertilization) waa halka ay uurka ka qaadaan dumarka (RIXIM) , waxaana ku baxday Warneford mingaleenkeeda in ladaweeyo £80,000 balse waa laga quustay.
Laba sano kadib markii laga quustay inay markaan caruur helikarto , laakiin waxaa ay qooyskaan heleen caruur.
Mark oo ah aabaha qooyskaan oo 55 sano jir ah ayaa aad ugu farxay in isaga iyo marwadiisa u rumowday riyadooda.
Ugu dambeeyn waxaa la ogaaday in haweeyeydaan gudaha caloosheeda ay ku jirtay Bectaria baabi’ineysey ukxaanta minida , laakiin waa ay dhimatay bectariyadaas waana sababta hada ay uurkaa u qaaday.
‘’Ma joojinkarin ilmada mar walba oo ilmaha iga soo daataan, kama rajo dhegeyn wax badan,’’ ayey tiri.
Sheekadaan ayaa noqondoontaa mid mar walba xusuus u noqonta qooyskaan, sababtoo ah waxaa qooyskooda kusoo biiray caruur.
JACEYLKA DAACAD U NOQDO:Gabar Isbitaal u tagtay si ay hal kelli u iibsato kaddibna u guursato wiil ay jeceshahay
Jaceylkeedu xuduud ma lahan, waayo waxay xitaa damacday in ay hal kelli iska iibiso si ay nin ay jeceshahay ugu guursato.
Gabadhan 21 jir ah oo u dhalatay waddanka Hindiya oo ku nool deegaanka Bihar ayaa horey loo soo furay, waxaana ay timid Isbitaal ku yaalla magaallada New Delhi ee caasimadda Hindiya si ay iib ugu hesho hal kelli oo ay isbitaalka ka codsatay in laga saaro kaddibna loo lacageeyo, iyadoo xilligaasi qorsheheedu ahaa in ay hesho lacag dhan Rs 1.8 lakh oo u dhiganta 2,668.45 dollar si ay ugu guursato wiil ay jeclaatay.
Markii ay Isbitaalka timid ayaa waxaa loogu yeeray lambarka dumarka caawiya ee 181 Women Helpline, waxaana lagu war geliyay booliska kaddib markii looga shakiyay in ay si sharci darro ah uga ganacsanayso keliyaheeda.
Kooxda DCW ayaa soo gaartay Isbitaalka oo wareystay haweeneydii, waxaana ay u sheegtay in ay ka soo carartay deegaankeedii Bihar kaddib markii reerkeedii u diideen wiil ay jeclaatay, sidaa awgeedna ay isbitaalkan u timid si ay u iibsato hal kelli oo meherkeeda isaga bixiso.
La taliyeyaal dhinaca booliska ka socday ayaa kula taliyay gabadhan in ay dacwad ku soo oogto ninka ay sheegtay inay guursanayso, balse way diidday waana la fasaxay, balse Booliska ayaa warbixin u diray qolyaha u dooda xuquuqda dumarka ee Bihar iyagoo ka codsaday in ay ka caawiyaan gabadhaasi sidii ay kiis dacwad ah ugu soo oogi lahayd ninka xiriirku ka dhexeeyo.
W/Q: Haaruun Yuusuf Khasaaro.
Faa’iidooyinka Laga Dhaxlo Wax Akhrinta Wanaagsan
Marka aanu ka hadlayno akhriska iyo faa’iidooyinka uu leeyahay maaha kuwa lasoo koobi karo, umad walibana waxay horumar ku gaartaa dadkeeda oo akhriska badiya, aqoon fiicaanna leh, waana tan ay dowladaha shisheeye horumar ku gaareen.
Diinteena islaamka waxa ay nagu baraarujinaysay akhrinta iney tahay nolosha qofka oo dhan, waana tan lagu amray nabi muxamed *N.N.K) eraygii ugu horeeyay ee la faray waxa uu ahaa akhri waana farriin guud oo umadda muslimka ah.
Hadii aan uguda galno akhriska iyo faa’iidada uu leeyay waxaan oran karnaa qeyb badan ayuu faa’iido u leeyahay sida:
Garaadku waa xubin ka mid ah xubnaha jirka bini aadanka waxa uuna u baahanyahay in mar walba la kobciyo, waxyaabaha lagu kobciyana waxaa ka mid ah akhriska in uu noqdo mid joogta culumada ku xeel dheeri arimaha caafimaadka waxa ay tilmaamayaa in qofka akhriska badan in uu ka caafimaad badan yahay garaad ahaan qofka aan waxba akhrin .
Ka hortagga walwalka
Waxaan shaki ku jirin in qof walba oo dunidan ku nool in mararka qaar uu la kulmo walwal ka yimaada dhanka shaqada ama qoyska , walalkaas wax yaabaha looga hortegi karo waxaa ka mid ah in qofku uu waxa akhriyo sida qu’aanka kariinka oo ha waxa ugu fiican ee qofku uu ku iloobi karo walwalkiisa, sidoo kale sheekooyinka xiisaha badan.
Waxaa hubaal ah in akhrisku uu kuu horseedayo horumarka noloshaada gaar ahaan marka aad akhriso waxa aad jeceshahay, waayo waxaa kuu kordhaya aqoon badan waxaadna noqonaysaa qof aqoon badan u leh takhasuskiisa, waxaana jira kutub badan marka aad akhriso aad ka helayo fikrado wanaagsan isla markaana aad ku maaraynayso noloshaada.
Marwalba oo akhriskaagu badan yahay waxaa hubaal ah in aad ka faa’iidaysanayso erayo badan oo aadan horay u aqoon, eray bixintaasi waxa ay kuu horseedaysaa in aad ka soocnaato dadka kale .
Marka aan ka hadlayo qoraal fiican waxaan ula jeedka in qof walba qofka uu ka akhris badanyahay ayuu ka qoraal fiican yahay . akhriskuna waxa uu kuu horseeday in qoraalkaagu uu noqdo mid wanaagsan oo la fahmi karo .
Mar walba oo aad waxa akhrinayso ama aa wax qorayso waxaad dareemaysa deganaasho joogta gaar ahaan intaa wax akhrinayo, waxayna ka mid tahay faa’iidooyinka akhriska
Ugu danbeyntii waxaad ogaataa sida loo kala wax akhrin badan yahay ayaa loo kala cilmi iyo aqoon badan yahay, dadkeena oo wax akhriyana waa dalkeena oo horumara, waa tii xikmaddu ahayd (خير جليس في الزمان كتاب ), taasoo macneheedu yahay saaxiibka ugu wanaagsan waa buugga illeen marnaba kama qalooneyside.
Awood Yari Galmo Ma Dareemeysaa, Arin Ka Wanaagsan Kaniiniga Viagra-ha Ayaan Idin Haynaa.
Admin 2 days ago	Ila tali, Lamaanaha, LOVE, MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Ragga badan ayaa ka sheegta awoodda galmadooda oo yar taasi oo ku aadan in malabyaroowga laheyn awood uu ku jiiro xubinta haweenka ( Jileec) waxa ayna ragga badan ku mashquuleen qaadashada kaniiniga caanka ah ee loo yaqaan Viagra kaasi oo leh dhibaatooyin badan muddo ka dib qaadashadiisa.
Iyadoo dhibaatooyinka ugu horeeyay marka qofka uu qaato ay ka mid yihiin iyadoo wajiga uu gaduuto , kuleel jirka ah iyo dibiryo , haddiiba ay dhaceyso Doorkahaweenak.com waxa ay kuula talineysaa haddii aad ka mid tahay ragga dhibkaas uu hayo in aad kaniinigaas qaadatid ka hor 30 daqiiqo ciyaarta adiga oo cabitaan sida caano badan ku liqaya.
Hadaba Shabakada Doorkahaweenak.com ayaa ku sheegeysa in miraha xulbada in ay aad ugu wacan yihiin xoojinta awooda galmada iyadoo mirahaas la shiidayo.
Dhowr xanuun ayay xulbada dhanka kale u wanaagsan tahay waxaana ka mid ah dadka neefsashada dhibeeyso , calool majiirka , sidoo kale xittaa dadka wajiga laab-laabka ka galay waa uu u wanaagsan yahay oo duqnimada kaama muuqaneyso .
Waxa ay qubarada arimaah qosyaka Maandeeq ku leeyihiin in xulbada lagu kariyo timirta iyo malabka in ay ragga aad ugu fiican tahay ee ka sheeganaya awood yarida dhanka galmada .
Tunuusiya oo dumarka u fasaxday guurka ragga aan Muslimiinta ahayn
Admin 2 days ago	Lamaanaha, MAXAA CUSUB
Dawladda Tunuusiya ayaa meesha ka saartay sharci dumarka u diidayay in ay guursadaan ragga aan Muslimiinta ahayn.
Arrintan ayaa timid bil ka dib markii madaxweyne Beji Caid Essebsi uu ku baaqay in meesha laga saaro sharcigaas.
Hadalkaas ayuu ku soo daray khudbaddii uu ka jeediyay maalinta qaran ee dumarka dalkiisa.
Markii madaxweynaha Tunuusiya uu ka hadlayay in sharcigan meesha laga saaro wuxuu ku macneeyay in uu caqabad ku noqday xoriyaddii xulashada lamaanaha.
Sharcigan hadda la laalay ee dumarka Tunuusiya u diidayay in ay guursadaan ragga aan Muslimka ahayn wuxuu soo jiray tan iyo sannadkii 1973dii, haddana waxaa meesha ka saaray wasiirka caddaaladda.
Hadda ka dib raga aan Muslimka ahayn loogama baahno shahaado caddaynaysa in ay Muslimiin, marka ay rabaan in ay guursadaan dumarka Tunuusiya.
Dad badan oo reer Tunuusiya ah ayaa arrintan iyo sharciyo kale oo isbadal lagu sameeyay u arka tallaabo horrumar ah oo loo qaaday dhanka xuquuqda dumarka ee dalkaas.
Biishii Luulyo ee sannadkan baarlamaanka Tunuusiya ayaa soo saaray sharci cusub oo dumarka ka difaacaya kufsiga iyo shaqaaqadaha kale ee guryaha ka dhaca.
Waxaa sidoo kale dastuurka laga saaray qaybtii ragga kufsiga gaysta ciqaabta ka saamaxaysay haddii ay guursadaan gabadhii ay faraxumeeyeen
Iyado dadkii taagta darnaa ee magaalada Xalab maalinimadii Arbacada laga raray gurigii hore ee dadka da’da ah ee ku dhaw furinta dagaalka ee magaalada, Dhakhtar ka tirsan hay’adda Laanqayrta cas oo qayb ka ahaa daadguraynta dadkaas ayaa BBC wuxuu u soo diray waraaqdan.
Anigoo dhakhtar ahaan ugu shaqeynaya hay’adda laanqayrta cas ee caalamiga ah ee (ICRC) waxaan ku arkay wax badan Suuriya shanti sano ee la soo dhaafay, laakiin ma arag tan mid la mid ah.
Waxaan isku daynay innaan gaarno bartamaha , waayo ma aynnan helin damaanad qaad amni oo la isku halayn karo. Dagaalku wuu xoogannaa. Sadex qof oo ku sugnaa xarunta ayaa dhintay xilligaas.
Haddii aynnu heli lahayn ogolaanshiyo aynnu ku aadno guriga dadka waayelka, kaasi oo u noqday gabaad illaa 150 qof, qaarkood waa naafo, qaar ayaa madaxa looga jiraa, inta kalena waa dad welwelsan oo aan aqoon jiho ay u dhaqaaqaan.
Annaga, Ururka bisha cas ee Suuriya iyo ICRC waxaynnu halkaasi u joognay innaan ka wadno dadkaasi Bariga magaalada Xalab.
Waxa ay aheyd goor horaba gudcur sida aynnu ku soconnay jidadka cariirriga ah ee magaalada qaddiimiga ah, waan garanayey deegaankan dagaalka ka hor, waxay ahayd meel camiran oo kobcaysa.
Hadda, waa dukun daakun. Jidadka ma aqoonsan karo, iskaba illow dhismayaasha. Magaalo bahallo galeen oo sida dhagixii u burburtay, waaMeel aduunku ku dhamaaday, waa sida caro afka goosatay.
Dhawaaqa rasaasta cabsida leh ayaa meel dheer laga maqlayaa, ma jiro wax buuq ah, dad ma joogo. Waa innaynu xoogaa lugaynnaa ilaa ugu dambayn dhamaadka, waayo gawaaridu ma gudbi karaan. Meel halkaas ah waxaa ka muuqda, laba guri oo burbursan. Mid waa ragga, midnna waa haweenka.
Waxaan galay dayrka dhismaha. Koox ka mid ah bukaanka oo rasaas haleeshay ayaa jooga, Waxay gashanayeen waxooga dhar ah wayna gariirayeen. Qaar ayaa jahwareersanaa waxay ahaayeen kuwo aad isagu dhow midba midka kale ayuu garabka ku hayey, hareerahooda ayay eegayeen,iyagoo isku dayaya midba kan kale uu ku tiirsado. Dhinaca kale waxaa yaalay maydad, waa illaa tobaneeyo.
Waan garanayey ninka xarunta maamula, waynnu la kulanay, waxaynnu ogaanay in gabi ahaaba qoyskiisii ay geeriyoodeen sadex maalin ka hor: waxaa ka mid ahaa xaaskiisii, wiilkiisii iyo wiil uu awoowe u yahay . Halkan ayuu keenay qoyskiisa waayo wuxuu is lahaa ma jirto cid weeraraysa xaruntan. Meydka dayrkaa yiil qaarkood waxay ahaayeen xubnihii qoyskiisa.
Gudcur ayaa is xidhay, heer kulkii ayaa aad hoos ugu dhacday, markaa waa inaan dhaqso u baxnaa. Waxaan aqoonsannay kuwa aadka ugu baahan caawimaadda. Intii aan hawsha ku jiray nin waayeel ayaa horteenna qabow ugu geeriyooday.
Daawo ma leh. qalabka la isku diiriyo ma jiro. Ma jiro shidaal cunto lagu karsado.Waxaan eegay dhismayaasha innoo dhaw si aan u eego bal wax dad ah, laakiin ma aanay jirin.
Laakiin waxaa jiray mayd kale. Waan u jeednay, laakiin wuxuu ku hoos jiray dhisme burburay. Ma jirin wax aan u qaban karnay,
Daadgurayntu ma ahan mid sahlan. Badi, gaar ahaan kuwa maskaxda ka jiran ma doonayn inay baxaan. Way jahwareersanayeen, ciirsi la’aan ayay ahaayeen. maba aanay garowsanayn inay ku nool yihiin aag dagaal.
Qaar ayaa halkaas ku noolaa afar illaa shan sano. Wax kalaba ma aanayn garanayn “Ma lihin qaraabo kale, ma haysanno meel kale oo aynnu aadnno,” qaarbaa lahaa waxaan doorbidaynnaa inaan halkan iska joogno”.
Ka dibna ciidammo ayaa yimid. Waxay wadeen lix caruur ah. Waxay ka soo heleen burburka, way dhunsanaayeen, ciirsi la’aan ayay ahaayen, gabar todobo sano jir ah ayaa ugu waynayd, kan ugu yarnna wuxuu ahaa wiil 7 bilood jir ah, waxba ma aanay cunin muddo laba maalmood ah.
Iyagu dhammaantood hadda uun ayay agoon noqdeen oo waalkood ayaa ku dhintay bam dhawrkii maalmood ee la soo dhaafay. Waxba, ma haystaan, cidnna ma haystaan, Maxaad oran kartaa?,
Image captionBisha & laanqayrta cas waxay daadgureeyeen dadka dhaawaca ah, kuwa waayeelka ah iyo kuwa naafada ah ee maskaxda ka jiran
Lahaanshaha sawirkaSYRIAN ARAB RED CRESCENT
Image captionQaar ka mid ah dadka maskaxda ka jiran ayaan doonayn inay baxaan
Xarunta gudaheeda 18 qof ayaa doonaya inay joogaan waayo ma haystaan meel ay aadaan. Waxaan rajeynayaa innaan dib ugu laabto oo aan u wax uun caawimaad ah u fidi
Cutub cusub dagaalka ahliga ah:
Dadkan waxay nolashooda ku waayeen dagaalkan foosha xun kaasi oo aannay shaqo ku lahay, oo aysanna go’aansan inay ka qayb qaataan. Waa kuwa ugu nugul dadka nugul. Mana jirto cid badbaadisay.
Tani ma ahan kumaa saxan iyo kumaa qaldan, kumaa guulaysanaya iyo kumaa guuldaraysanaya. Tani waxay ku saabsan tahay dadka, jirkooda iyo dhiigooda, aadanaha ayaa Dhiigbaxaya, dhimanaya,qaar baa laga dhigayaa agoon, maalin kasta.
Waxaan dareemayaa murugo aad u wayn maanta. Fadlan dagaalku waa in uu xad yeeshaa.
Tunisiya oo xirtay baar muusik iyo aadaan isku daray
Admin 2 days ago	MAXAA CUSUB
Baar ku yaalla Tunisiya ayaa albaabada loo laabay ka dib markii la arkay muuqaal muujinaya aadaan loo daaray dad qoob ka ciyaar dheelaya, sida ay saraakiishu sheegeen.
Muuqaalkan oo laga duubay magaalada Nabeul ee ku taaalla waqooyiga bari ee dalka Tunuusiya ayaa la soo bandhigay Axaddii, dad badan oo ka carooday arrintaas ayaana dareenkooda ku soo gudbiyay baraha ay bulshadu ku xiriiraan.
Gafarnatooraha Nabeul, Mnaouar Ouertani ayaa sheegay in baarku uu sii xirnaandoono ilaa iyo amar dambe.
Baaritaan arrintaas la xiriira ayaa la billabaay
Muuqaalka la helay ayaa muujinaya dad baar jooga oo qoob ka ciyaar dheelaya, kuwaas oo ay muusik u daarayaan labo ruux oo reer galbeed ah, halkaas oo u dhaw goobta loo tamashle tago ee Hammamet oo xeebta agteeda ah.
Muusikada ayaa lagu daray aadaanka salaadda.
Ouertani ayaa sheegay in markii ay dhacdadaas xaqiijiyeen ay go’aansadeen in ay albaabada u laabaan baarka.
Wuxuu intaas ku daray in ay xabsiga la dhigay maamulihii baarka wuxuuna sheegay in baaritaanno ay socdaan.
Qoladii soo abaabushay ayaa raaligalin soo galiyay facebook, laakiin waxay sheegeen in aysan qaadaynin masuuliyadda daaridda muusiggii dhib keenaya.
Qofkii daaray ayaa raaligalin bixiyay wuxuuna sheegay in uusan marnaba uga gol lahayn in uu qof ku xumeeyo.
Lamaane Tunuusiya loogu xiray in ay is dhunkadeen
Maxkamadda racfaanka ee dalka Tunuusiya ayaa ayidday xukun anshax xumo bulshada lagu dhex sameeyay ah oo lagu riday lamaane gaari isku dhex dhunkaday bishii Sabtembar.
Nessim Ouadi oo Faransiiska u dhashay ayaa lagu eedeeyay in uu booliiska amardiiday markii ay xirayeen isaga iyo gabadha ay saaxiibbaha yihiin ee reer Tunusia.
Lamaanahan ayaa lagu kala xukumay afar bilood oo ninka ah iyo labo billood oo gabadha ah, balse xukunkan ayaa ka sahlan midkii markii hore lagu xukumay.
Kiiskan ayaa caro xoog leh ka dhaliyay baraha bulshada, waxaana laga dooday anshaxa bulshada dhexdeed iyo doorka booliiska.
Dacwad oogaha ayaa sheegay in saxaafadda caalamku ay six un u tabisay warkan laamanahanna ay qaawanaayeen ayna isu galmoonayeen marka la qabtay.